Tools&TIps | Sakura Auction
AUTOMOBILE အများစုတွင်ယခင်က(Mechanical key) သော့ချောင်းကိုသာအသုံးပြုကြ သည်။ ယခုအခါတွင်ယခင်ကMechanical key အစား Smart key ကိုအသုံးပြုလာကြသည်။ SMART KEY ဆိုသည်မှာ Electronic technology ဖြင့် data ထည့်ထားပြီး Radio wave ဖြင့်အလုပ်လုပ်သော Remote control system ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် Driver သည် Lock လုပ်ခြင်း၊Unlock လုပ်ခြင်းနှင့် Engine ရပ်၊နှိုးခြင်းများကို Mechanical key သုံးစရာမလိုဘဲ Smart key နှင့် Push start ကိုသုံးခြင်းဖြင့် Vehicle အားထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ Push start ဆိုသည်မှာယခင်က... + read more
DIAGRAM OF SMART KEY AND PUSH START
Imagineasystem that will fundamentally change how you access and start your vehicle. Designed and built based on the popular luxury vehicle’s hands-free keyless access and start function; by carryingathin-profiled access card you will have complete access and ignition control over your vehicle without taking out keys or pressing buttons on the remote. Built with the latest secure RFID technology and combined with rolling-code encryption, this... + read more
လေအိတ်စနစ် (airbag system)
လေအိတ်စနစ် (airbag system ) ဆိုသည်မှာ - မော်တော်ယာဉ် လုံခြုံမှုရှိရန်အတွက် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။လေအိတ်စနစ်ဖွံ့ ဖြိုးလာသောကြောင့် သင်နှင့်သင်၏ ခရီးသည် တို့ ကို ပြင်းထန်သောထိခိုက်မှု နှင့် အသက်သေဆုံးခြင်းတို့ မှ ပြန်လည်ရှင်သန်ကျန်ရစ်စေဖို့အတွက် လေအိတ် စနစ် ကပြုလုပ်ပေးမှာအသေအချာပင်ဖြစ်ပါသည်။အသက်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုလည်း လေအိတ်စနစ် ကနှစ်စဉ်ကာကွယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးစက္ကန့် ပိုင်းအနည်းငယ်အတွင်းလေအိတ်အလုပ် လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ လေအိတ် (airbag ) အလုပ်လုပ်မှသာ သင်နှင့်... + read more
VVT-I သည် variable valve timing with intelligence system ကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့ ကို internal combustion engines များတွင် valve timing ဖြစ်သည့်inlet , exhaust စသည့် တို့ ကိုလိုအပ်သည့် degree အလိုက် valve overlap timing ကို ချိန်ရာတွင် သုံးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတို့ တွင် အမျိုးအစားများကွဲပြားစွာတည်ရှိကြပြီး engine head များရဲ့အပေါ်တွင် valves များကို တပ်ဆင်ထားသည့်အမျိုးအစားများလည်းရှိသည်။ ထို့ အပြင် engine head အပေါ်တွင် camshaft ၂ချောင်းတပ်ဆင်ပြီး valves များကိုRocker arm မျ... + read more
Automotive engine cooling system အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ။ အင်ဂျင်များတွင်လေနင့်လောင်စာဆီ လောင်စာဆီလောင်ကျွှမ်းမူကြောင့် အပူစွမ်းအင်ဖြစ်ပေါစေပါတယ။် ထိုအပူစွမ်းအင်ရဲ့ 1/3 မုာအင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများအလုပ်လုပ်ရန်နင့်မော်တော်ယဉ်ရွေ့လျားရန်အတွက်စွမ်းအင်(power)အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲ ပေးပါတယ်။ အခြား 1/3 မှာ exhaust system မှတဆင့်ပြင်ပလေထုထဲသို့ရောက်ရွိသွားပါတယ်။ ကျန်သော 1/3 ကို cooling system ဖြင့်ဖယ်ထုတ်ပေးရပါတယ်။